ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုမ္ပဏီသည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသောဒူဘိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည်
ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ & ဖြေရှင်းနည်းများ
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နှင့် Professional ကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ဒူဘိုင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာပြwithနာများအတွက်သင့်အားကူညီရန်ဥပဒေ၊ စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိသောဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ။ ကျွမ်းကျင်သည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်!
ဥပဒေသည်စီးပွားရေးနှင့်လက်ချင်းတွဲနေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်ရာအရည်အချင်းပြည့်မီသောရှေ့နေများ၏အကူအညီဖြင့်အခြားဥပဒေဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများကကူညီပေးရန်ထက်ကျွန်ုပ်တို့ကျော်လွန်သွားသည်။
မင်းတို့အားဒူဘိုင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့တရား ၀ င်အကူအညီရရန်သင်ကူညီနိုင်သည်။ တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တရားဝင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ လုံ့လဝီရိယရှိမှု၊ ဥပဒေအကြံပေးမှု၊ အိမ်ခြံမြေဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးနှင့်စျေးကွက်မိတ်ဆက်ခြင်းများကိုယူအေအီးနှင့်ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအခြားနိုင်ငံများမှပေးသည်။
သင်သည်ယူအေအီး၌သော်လည်းကောင်း၊ အခြားကမ္ဘာ့ဘက်ခြမ်း၌သော်လည်းကောင်းတရားဝင်အကူအညီရယူသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုအကူအညီကိုသူတို့နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဥပဒေပြုမှုများကိုအပြည့်အဝနားလည်ထားသည့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောရှေ့နေများကပေးသည်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အိမ်တွင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုသောတရားဝင်ဘာသာပြန်ဆိုသူများဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်ဘာသာစကားနှင့်အခြားဘာသာစကားများ။
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုစီးပွားဖြစ်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ မိသားစု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတောင်းဆိုမှုများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်တရားစွဲဆိုမှု၊ တရားမ ၀ င်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အလေ့အထများကိုအမြဲတမ်းနား ထောင်၍ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရရှိစေရန်အကောင်အထည်ဖော်သည်။ သင်ရင်ဆိုင်နေရသောဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူပြည့်စုံသောဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောက်သည်များအားလုံးအတွက်ဥပဒေဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူအေအီးရှိကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေများဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးတို့တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးထူထောင်မှုတွင်ကူညီခြင်းအပါအ ၀ င်အားလုံးပါ ၀ င်သည့်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စာချုပ်မူကြမ်းများကိုတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ၊ အိမ်ခြံမြေဥပဒေ၊ ယူအေအီးအလုပ်သမားအလုပ်သမားဥပဒေ၊ လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီများ၊ မိသားစုဥပဒေနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေများမှသည်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကကူညီသည်
Emirates ခုနစ်ခုနှင့် DIFC တရားရုံးရှိယူအေအီးတရားရုံးများ၌ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်၊ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း၊ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ခြင်းသို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုခြင်းများမှတစ်ဆင့်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သဘောတူညီချက်များအားရည်ရွယ်ချက်များတည်ဆောက်ပုံ၊ အကြမ်း၊
ပြင်းထန်သောအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသည့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများသည်ဖောက်သည်များ၊ ၎င်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ခြင်း၊
ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားတရားဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ပါသည်
ဒူဘိုင်းရှိတရား ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ယူအေအီးအစိုးရအနေဖြင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိနိုင်ငံခြားဥပဒေကုမ္ပဏီများအားအကန့်အသတ်ဖြင့် ၀ င်ရောက်ခွင့်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုခွင့်ပြုသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်။
ယူအေအီးသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်တတ်နိုင်သောတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ ကြီးထွားလာနေသောလူလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ဤကွာဟမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြားကွာဟမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကွာဟချက်ကိုသတိပြုမိပြီးပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်များအတွက်အထူးတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အပြုသဘောဆောင်သောအစပြုလုပ်ဆောင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မိသားစုအငြင်းပွားမှုများ၊ ဆက်ခံခြင်းအစီအစဉ်၊ အိမ်ခြံမြေအစရှိသည့်အထူးပုဂ္ဂလိက ၀ န်ထမ်းများ၏တရားဝင်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်သောအလယ်အလတ်အဆင့်အိမ်ထောင်စုများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမတန်းစားတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များသာမကဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးရှိလူလတ်တန်းစားဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ နည်းပညာနှင့်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အနာဂတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း
အဆိုပါ ဥပဒေရေးရာအလုပ်အကိုင်သည်အစဉ်အလာအရအမြဲတမ်းသိပြီးပြောင်းလဲလိုစိတ်မရှိကြောင်းအမြဲတမ်းလူသိများခဲ့ပြီး၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာကိုမှီခိုမည့်အစားဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တရား ၀ င်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှာနောက်ကျကျန်ခဲ့သည်မဟုတ်သော်လည်းဥပဒေနယ်ပယ်တွင်နည်းပညာ၏အတိုင်းအတာ၊ အရှိန်အဟုန်နှင့်ရောက်ရှိမှုသိသိသာသာရှိသည်။
ယနေ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီများသည်စျေးနှုန်းကိုသိသောဖောက်သည်များ၊ တတ်နိုင်သောနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများဖြင့်စျေးကွက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်လျက်ရှိပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများပြားလာခြင်းကြောင့်နာရီတိုင်းအားသွင်းပေးသည့်ရိုးရာဝန်ဆောင်မှုကိုမှီခိုနေရသည်။ ရလဒ်မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာသည်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည့်ပုံစံကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးရာဥပဒေကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေခြင်းကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းစေပြီးယှဉ်ပြိုင်မှုပုံစံအသစ်များနှင့်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများပိုမိုပေးစွမ်းရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ အချို့သောကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သောတရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြန့်ဝေမှုပုံစံအသစ်များမှာ -
2. သမားရိုးကျဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆန်းသစ်သောမော်ဒယ်များကိုကမ်းလှမ်းသောအခြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
၃။ နည်းပညာဖြစ်စဉ်များကို အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များအားမှန်ကန်သောလုပ်ငန်းများကိုသေချာစေရန်၊ ထိရောက်မှုရှိစေရန်၊ အန္တရာယ်လျှော့ချရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်။
၄။ ရှေ့နေများသည်တရား ၀ င်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၏ယုံကြည်ချက်ဟောင်းများကိုငြင်းပယ်ခြင်း။ ဤလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်စေနိုင်မည့်အစားစီးပွားရေးအခက်အခဲများအဖြစ် ပို၍ ရှုမြင်ကြသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်အပြောင်းအလဲများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများပြုလုပ်နေပြီးသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများကိုပိုမိုအသုံးပြုလိုကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ယနေ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကုမ္ပဏီများသည်“ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဌာနများ” ကိုနည်းပညာအသစ်များရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အနာဂါတ်အတွက်ဆန်းသစ်သောနည်းဗျူဟာများပေးအပ်ခြင်းကိုရည်ရွယ်ထားသည်။ ဥပဒေရေးရာနည်းပညာဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများတွင်စာရွက်စာတမ်းရှာဖွေမှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ တရားစွဲဆိုမှုများ၏ရလဒ်ကိုခန့်မှန်းရန်ကူညီခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် M&A အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များပါဝင်သည်။ များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ကိုသက်သာစေရန်နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးတသမတ်တည်းရလဒ်များကိုသေချာစေရန်အတွက်စမတ်စာချုပ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသည်။
ဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာနေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုအစုံနှင့်စွမ်းရည်အသစ်များလိုအပ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများစွာကသဘောပေါက်နားလည်ထားကြသည်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေများသည်ရှေ့နေများထက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည်။ များစွာသောနိုင်ငံတကာဥပဒေကုမ္ပဏီများသည်စာချုပ်များနှင့်တရား ၀ င်စာရွက်စာတမ်းများကိုမည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် coding သင်တန်းများတွင်အပေါင်းအသင်းများကိုစာရင်းသွင်းသည်။